स्वादिष्ट फल र हेरचाह गर्न सजिलो संग क्रप पैदावार जुटाउने - हरेक माली को सपना। त्यो यस्तो टमाटर Buyan छ। 2012 मा साइबेरिया मा विभिन्न प्रदर्शित। जहाँ वसन्त frosts अक्सर, गर्मी छोटो छ र एक सानो सूर्य न्यानो दिन क्षेत्रमा - विशेषज्ञहरु प्रजनकों यसलाई सफलतापूर्वक जोखिमपूर्ण कृषि मामलामा फल फलाउँदैन भन्ने यस्तो तरिकाले संस्कृति को विशेषताहरु चयन भएको थियो। टमाटर पकाना धेरै प्रारम्भिक राम्रो खडेरी, तापमान अचाक्ली सहनु र उचित हेरविचार संग रोग susceptible छैन।
टमाटर Brawler: विवरण
यो प्रारम्भिक maturing छ, झाडी, determinate टमाटर प्रजातिहरू। फल रातो र पहेंलो छन्। बिरुवा रोपण को दृश्य मा क्षेत्र हुर्किसकेका छन्, स्प्राउट्स बिरुवाहरु फैलयो छैन। यसलाई खुला बेड र Greenhouses मा उर्वर soils राम्रो तरिकाले बढ्छ। ब्रश कम (कुनै थप 45-50 भन्दा सेमी) हो, त्यसैले तिनीहरू छैन गाँसिएको गर्न सकिन्छ। Buyan को लाभ को एक किनभने यो पक्ष मार उत्पादन गर्दैन यो चिमोटे गर्न आवश्यक छैन भन्ने छ। यो वनस्पति अवधि - 100 दिन।
टमाटर Buian एकदम सजिलै खडेरी सहन र चिसो, एक प्रतिरोध छ सुर्ती मोशाको र अन्य रोगहरु। विविधता हेरविचार, उदार फल को undemanding छ।
टमाटर Buyan को किसिम एक सिलिण्डर, चिल्लो, चमकदार प्रारम्भिक पर्याप्त पकने फल छ। स्वाद मीठो र अमिलो छ। वजन 70-100 जी, व्यक्तिगत फल 200 G पील चिल्लो, पातलो र चमकदार पुग्न सक्छ। फल मा बीउ एक सानो, प्रति टमाटर मात्र 4-5 टुक्रा। विविधता एक उच्च पर्याप्त उपज छ। त्यसैले, एक वर्ग मीटर संग टमाटर को 7-9 भन्दा बढी किलो सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ। टमाटर Buyan एक विश्वव्यापी उद्देश्य छ, त्यसैले यसलाई नुनीन बनान लागि पूर्ण छ। साथै, टमाटर स्वादिष्ट ताजा, धमाकेदार र सूर्य-सुकेको हो।
लाभ र विविधता बेफाइदा: माली समीक्षा
किसान, क्रमबद्ध को खेती मा एकदम unpretentious देखि प्रतिक्रिया, यो बाँध्दा गर्न आवश्यक छ। टमाटर बिरुवा फैलयो छैन। फल प्रारम्भिक पकाना। साथै, उच्च उपज चिन्ह लगाइयो। उचित हेरविचार संग, एक वर्ग मीटर संग टमाटर को 7-9 किलो सम्म संकलित गर्न सकिन्छ। ग्रेड सजिलै दिन र रात तापमान एक तेज परिवर्तन स्थानान्तरण गर्न सक्षम। धेरै धेरै प्रारम्भिक पकाना जो पाकेको फल, को उत्कृष्ट पूर्ण-bodied, मिठाई र अमिलो स्वाद सराहना। यो विविधता अर्को राम्रो सुविधा एकदम उच्च zavyazyvaemost छ।
टमाटर को मुख्य drawback - ताजा, तिनीहरूले दीर्घकालीन भण्डारणको लागि अभिप्रेरित छैन। तर, यो बावजुद, टमाटर Buyan धेरै राम्रो समीक्षा पाए।
खेती को सुविधाहरू
बीउ रोपेको लागि आदर्श समय मार्च छ। रोपण गहिराई 3.2 सेमी। बीज न्यानो ठाउँमा माटो वा पीट, टीन, कभर फिलिम को compacted माटो गीली पत्र मा राखिएको र पुनर्व्यवस्थित छन्। जब मार, पन्नी हटाउन र राम्रो रोशनी ठाउँ मा राख्नु हुनेछ। 6-7 दिनको लागि तापमान 15-17 डिग्री हुनुपर्छ, र त्यसपछि 21-22 डिग्री गर्न उठायो। 1-2 पातहरू छानिने गर्दा (छेउ शाखा लागि मुख्य रोगाणु मूल उत्तेजना को तल कटौती)। यो एक स्थायी ठाउँमा प्रत्यारोपण गर्न बढ्नेछ जहाँ एक कन्टेनर, मा बिरुवा प्रत्यारोपण। यो प्रक्रिया को लागि मात्र राम्रो बलियो बिरुवा लिएको छन्। बादल मौसम वा राति आयोजित swordplay बिरुवा। सुरू काम अघि देशमा राम्रो बगाएको। 2-3 दिन बलियो सूर्यका देखि pritenyayut को अन्त पछि।
जीवाणुहरू खुवाउने बाहिर 2-3 पटक लगे छ। कठोर भएको बिरुवा transplanting अघि एक हप्ताको लागि। चिसो को खतरा पारित गरेको छ जब स्थायी बनाउन को लागि बिस्तर। बिरुवा 1 वर्ग को एक आवृत्ति मा रोपिन्छ। एम 7-8 ब्रश।
टमाटर Buyan रोगहरु को एक किसिम गर्न सबैभन्दा प्रतिरोधी विविधता छ। खेती संस्कृति को नियम संग सख्त अनुपालन मा सजिलै रोगहरु को एक किसिम सामना गर्न सक्नुहुन्छ। तर, जोखिम अझै विद्यमान छ।
खैरो मोल्ड। रोग गाढा स्थलहरू हरियो फल उद्भव मा नै प्रकट। रोग को मुख्य कारण - चिस्यान को कमी, र क्याल्सियम। क्याल्सियम नाइट्रेट र नियमित पानी छिडकाव द्वारा बिरुवाहरु मद्दत गर्न सक्छ।
लेट blight। किनभने अत्यधिक चिस्यान र तापमान परिवर्तन पात र फल को यो रोग एक खैरो रंग प्राप्त। लेट blight प्रयोग संग संघर्ष बरद मिश्रण र तामा सल्फेट, साथै बोट लागि थप अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्नुहोस्।
अक्सर, उत्पादक फल दरार कि गुनासो। यो overfeeding एक परिणाम, बुश मा टमाटर को एक ठूलो संख्या को प्रचुर सिंचाई, र प्रकाश को कमी हुन सक्छ।
को नपाकेको फल आधार मा एक विशेषता स्थान छ। टमाटर पाकेको र रातो रंग प्राप्त हुनेछ, यो गायब हुनेछ।
रोगहरु साथै टमाटर Brawler (फोटो लेख संलग्न) कीराहरूको किरा आक्रमण गरिएको छ। को लाभ्रेकीरालाई, लाईकीराको र whitefly - beetles र तिल crickets को लार्वा बिरुवाहरु को जरा र पात को धेरै रुचाउनु छन्। यी किरा लड्न र विशेष लागूपदार्थ प्रयोग को रोकथाम लागि।
तपाईं कृषि प्रविधिको अवस्थाको पालना भने, किरा र रोगहरु को दायरा धेरै व्यापक हुन सक्छ।
टमाटर Buyan को किसिमहरु को मानक विवरण लामो समय फल ताजा लागि भण्डारण गरिएको छैन भन्ने जानकारी छ। तर, केही माली सुक्खा सफा एक तामचीनी कचौरा मा जोडेको र गाढा ठाउँमा राख्न बाली गर्न सल्लाह छन्। त्यसैले ताजा टमाटर तपाईं पनि नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या मा खान सक्छ।
माली भन्न रूपमा, टमाटर को किसिमहरु विवरण धेरै सही र पूर्ण सत्य हो। यो संस्कृति, एकदम unpretentious र उच्च-yielding धेरै चिसो जलवायु संग क्षेत्रमा बढ्दै लागि आदर्श छ। टमाटर बढ्न Buyan प्रयास गरेका ती, धेरै सन्तुष्ट थिए।
कसरी घर मा र कुखुरा फारमहरु मा बिछाउने hens खुवाउन?
टमाटर "प्रकृति को रहस्य": विशेषताहरु र किसिम को विवरण, फोटो समीक्षा
अल्पाका: यो प्राणी के हो?
औषधि "Carnitone": प्रयोगको लागि निर्देशन
स्वागत र कागजातहरू को प्रसारण को कार्य - एउटा महत्त्वपूर्ण कागजात वा औपचारिकता?
पदार्थ को रासायनिक संरचना
एरिक Bana: अभिनेता Filmography र पुरस्कार
दबाइ 'Fermatron': प्रयोगको लागि समीक्षा र निर्देशन